Kitra any Frantsa: nodimandry i Hidalgo mpanazatra ny Les Bleus | NewsMada
Kitra any Frantsa: nodimandry i Hidalgo mpanazatra ny Les Bleus
Misaona ny tontolon’ny baolina kitra any Frantsa, amin’izao fotoana izao. Nodimandry teo amin’ny faha-87 taonany, ny alakamisy 26 marsa lasa teo, i Michel Hidalgo, mpanazatra ny ekipam-pirenena frantsay, tamin’ny taona 1984. Fotoana nandrombahan’ny Les Bleus, ny ho tompondakan’i Eoropa “Euro”. Anaram-boninahitra voalohany azon’ny ekipam-pirenena frantsay.
Tsy “coronavirus” no nahafaty azy fa ny fahanterany, araka ny vaovao navoakan’ireo mpampahalala vaovao any an-toerana. Raha tsiahivina, anisan’ireo mpilalao niaraka tamin’i Michel Hidalgo, tamin’izany, i Michel Platini sy ry Alain Giresse, mpanazatra an’i Tonizia, tany amin’ny “Can 2019”, farany teo. Anisan’ireo niaraka taminy koa i Marius Tresor sy i Bernard Lacombe. Samy nanambara izy ireo fa very Olomanga ny baolina kitra frantsay, “Olona tia mifandray sy mahay miara-monina amin’ny rehetra Itompokolahy. Mahasahy ary tsy matahotra amin’ny fanapahan-kevitra raisiny izy”, hoy i Platini.
Naneho izay alahelony izay ihany koa i Noel Le Grael, filohan’ny federasiona frantsay ny baolina kitra ka nilaza fa anarana tsy azo kosehina eo amin’ny tantaran’ny baolina kitra frantsay, i Michel Hidalgo noho ny zava-bitany.